1994 yaiva jeri rega ini ndichiita - New York Times - TELES RELAY
HOME » mwe 1994 yaiva jeri rekuzviita ini - New York Times
1994 yaiva jeri rekuzviita ini - New York Times
1994 yaizoenderera mberi muupenyu hwangu. Mumazuva ekutanga kwegore rangu idzva, ndakanyora mazita evandaifambidzana navo wandakanga ndava neshamwari kanenge kaviri mumavhiki matatu apfuura - anenge makumi matatu ehuwandu - uye akavatumira nyora kutsanangura kuti ndingadai ndisingakwanisi kuitevera. vhiki email, meseji, mashoko pakarepo, yakananga shoko Instagram, Twitter zvakananga mashoko, tweet kana mashoko anozivikanwa vakataura Instagram, Handina pangozi, rehab kana kunyange kunze kweguta, uye ndinoda kuti nhau dzavo pamusoro pefoni (kusanganisira pahofisi yangu yekushanda) kana vaida kutaurirana kana kuita zvirongwa. (Vanhu vashomanana vanga vari.) Ndakashandura iPhone yangu mumunda wepasi nekuvhara zviziviso zvebasa rega roga, kunze kwekufonera, uye ndichiisiya ichivharirwa mucheka rekukanda mukicheni yangu. Ndakadhinda mapeji manomwe efonhare shamwari nokuti ndakanga ndisingazivi nhamba dzefoni dzeshamwari dzangu, kana kunyange nhamba yefoni yemurume wandakanga ndange ndiine mukomana kwemakore mana uye kuti ndiri kubatanidzwa,
Ndakatenga chaiyo 1994. Radio Shack terevhizheni yakagadzirwa neyakagadzirwa muvhidhiyo reBay. Akaputsika. Kaseti katepekodhi reRadio Shack zvakare akatenga pa eBay zvakare akaparara. Kwete kare kare, 1994, asi zvinhu zvose kubvira 1994 zvakaputsika, kana kuti zvakaita sezvo. Ini akazvidemba kuti Sony Walkman 1994 ndakagamuchira kunzi kukuvaradzwa, sezvo pasina mumhanzi chaipenya pandakasvitsa pamusoro, asi zvino ndakaona kuti Walkman taingokumbira nezvengowani vasati kunogona kuparadzirwa (yakawandisa zviteshi zveredhiyo kana boka guru rekudaidza ndakatenga muchitoro chekuchengetedza chechina). Ndakatya wachi kuti ndakatenga kutsiva kwangu mangwanani kudanwa - Bheya rakamira pachando kumativi mapurasitiki apo sunbathing pamusoro Lounge cheya pedyo chiratidzo zvichiratidza pedyo North Pole akabata dende Coca-cola neimwe ruoko , yakagadzika pachidimbu tsvuku ye digital clock base yekutakura logo yeCoca-Cola - yakaputsika nokuti ini ndanga ndisingakwanise kuiita. Dambudziko racho rakava dongo risipo; Yakanga iine nguva yakareba kudai ndakanga ndisati ndashandisa chigadzirwa chemagetsi nebhateri, ndaifanira kukwanisa kuivhura (kana kuiwana) uye ndakanga ndave ndakakanganwa kuiongorora. (Ndinofunga kuti chigadzirwa chingave chichiri kuputsika, nokuti kunyange zvazvo ndakazozvinzwa ichiimba, "Coca-Cola inogara iri iyo!" Nguva dzose pane mufaro, pane nguva dzose Coca-cola! Hongu! "bere haana zvishoma nezvishoma, sezvo aizova nyaya vose mumwe aramu nenguva yeko Clock-Tan-mushana 1994 musi eBay.)
Nokuti ndakanga ndisingakwanisi kumira pfungwa yekurega kunyange imwechete. Muvhiki yekutanga yemuchato wangu, ndakatenga nyaya yakakosha ye1994 kubva kuWe Magazine's on Wedding Wedding (umo Marla Maples, akaroora kare December 1993 ne "mogul" Donald Trump - pachivharo), pamwe neBhuku ra308 ra1994 rine musoro unonzi "Mukadzi Wose Wose Bhuku reEtiquette." (Peji 213: "" Ko vana DJs havazviratidzi pamapati mu jeans, vanopfeka zviketani zvegoridhe here? "Ingotsanangura kuti iwe unoda DJ kuti apfeke chimiro chakanaka.") Ndakaraira bhuku Muna 1994, ndakawana "Cooking Light Cookbook 1994". Ndakakwereta Zaga kubva ku1994. t wekushanda naye.
Kuti andibatsire kuziva zvivako zvaive zvakachengeteka kupinda 1994, ndakawana "New York, mutungamiri weguta guru", bhuku rekufamba rakabudiswa mu1994 iro rinogara richikurudzirwa (ne Hurumende yeNew York) kune avo vanoda kuwana chiremera chekufambisa chekufambisa. Nokuda kwezvivaraidzo, ndakatenga mabhuku e "The Celestine Prophecy" uye "Prozac Nation", uye nokuda kwekuvhidzira, ndakatenga ma-aerobic VHS matepi akatungamirirwa paBay.
Pamusana penyaya yemamiriro 1994 Times About kushandisa munhu bvudzi zvigadzirwa, ndakatenga shambuu uye conditioner Mane & Muswe (zviri kutengeswa huru yese mabhiza) yangu womunharaunda chemishonga uye Match True Foundation 'Oreal Paris (kutanga 1994), Maybelline's Great Lash mascara (1971) uye Noxzema Original Cleansing Cream (1914). Ndakatenga bhuku 1 188 1994 mapeji vaitakura chenhema nyore zita "Kushandisa Indaneti", iro raiva nezvitsauko akadai "BBS, UUCP nezvimwe vacho mabasa" vaiva zvisinganzwisisiki kwandiri, munhu zvakawanda paInternet chete muhupenyu chaihwo.
Mushure mekunyadzisa uye gore muAustralia, Bowen inotarisa NBA
Murume akasungwa nokuda kwekuona zvinonyadzisira; yaimbopomerwa mhosva yekubatwa zvepabonde pamhuka - xnxx